Obu Ojuju Ojuju Ochie: :gha, Eziokwu, na Ndụmọdụ M | Martech Zone
Nchịkọta Afọ Ojuju Ochie: Mygha, Eziokwu, na Ndụmọdụ M
Tọzdee, Machị 25, 2021 Saturday, April 10, 2021 Douglas Karr
Ruo ihe karịrị afọ iri, Google na-alụ ọgụ megide akụkọ ifo nke ntaramahụhụ ọdịnaya abụọ ahụ. Ebe ọ bụ na m ka na-aga n'ihu ịjụ ajụjụ na ya, echere m na ọ ga-aba uru ikwurịta ebe a. Nke mbụ, ka anyị tụlee verbiage ahụ:
Gịnị bụ Ọdịnaya abụọ?
Ihe oyuyo ndi ozo na-ezo aka na otutu ihe di n'ime ma obu gafee ngalaba nke zuru oke ya na ọdịnaya ndi ozo ma obu nke yiri ya. Ọtụtụ n'ime ha, nke a abụghị aghụghọ n'aka.
Google, Zere ọdịnaya oyiri
Gịnị Bụ Oyiri Ọdịnaya Ojuju?
A ntaramahụhụ pụtara na saịtị gị adịghịzi edepụtara na nsonaazụ ọchụchọ kpamkpam, ma ọ bụ na ibe gị belatara nke ukwuu na ogo na isi okwu ụfọdụ. Onweghi. Oge. Google chụpụrụ akụkọ ifo a na 2008 n'agbanyeghị nke ahụ, ndị mmadụ ka na-atụle ya ruo taa.
Ka anyi tinye akwa a na mgbe nile, ndi be anyi: O nweghi ihe dika “ntarama ntaneti oyuyo.” Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị n'ụzọ ọtụtụ ndị si ekwu okwu mgbe ha kwuru ya.
Google, Na-egosiputa ntaramahụhụ oyiri nke oyiri
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ịdị adị nke ọdịnaya abụọ dị na saịtị gị agaghị enweta ntaramahụhụ maka saịtị gị. Ka nwere ike ịpụta na nsonaazụ ọchụchọ ma ka nwee ọkwa dị mma na ibe nwere ọdịnaya abụọ.
Gini mere Google ji choro ka ị zere oyiri oyiri?
Google chọrọ ahụmịhe onye ọrụ dị elu na Nchọgharị Nchọgharị ya ebe ndị ọrụ na-achọta ozi bara uru na pịa ọ bụla nke nsonaazụ ọchụchọ. Ọdịnaya abụọ ga-emebi ahụmịhe ahụ ma ọ bụrụ na nsonaazụ 10 kacha elu na peeji nsonaazụ ọchụchọ engine (SERP) nwere otu ọdịnaya ahụ. Ọ ga-ewe onye ọrụ ahụ nkụda mmụọ na nsonaazụ ọchụchọ ya ga-erichapụ ụlọ ọrụ SEO nke ụlọ ọrụ SEO naanị na-ewulite ugbo ọdịnaya iji chịkwaa nsonaazụ ọchụchọ.
Ihe oyuyo abuo na saịtị abughi ihe eji eme ihe na saịtị ahu ma oburu na o yiri ka ebumnuche nke oyuyo di iche iche bu nduhie ma ghazie ihe nchoputa nchoputa. Ọ bụrụ na gị na saịtị ahụ na-ata ahụhụ si oyiri ọdịnaya mbipụta… anyị na-eme ezigbo ọrụ nke ịhọrọ ụdị nke ọdịnaya igosi na nsonaazụ ọchụchọ anyị.
Google, Zere Avoidmepụta Ọdịnaya Oyiri
Yabụ enweghị ntaramahụhụ na Google ga-ahọrọ nsụgharị iji gosipụta, gịnịzi mere ị ga-eji mee zere ọdịnaya abụọ? N’agbanyeghi na enweghi ntaramahụhụ, gị nwere ike ka na-ewute ikike gị ịkwado nke ọma. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Google nwere ike ịga gosi otu peeji na nsonaazụOnye nwere ikike kachasị mma site na backlinks wee gaa zoo ihe ndị ọzọ na nsonaazụ ya. N'ihi ya, mgbalị a na-etinye na ibe ọdịnaya abụọ ndị ọzọ bụ naanị ihe efu mgbe ọ na-abịa n'ịchọ njin ọchụchọ.
Ogologo ibe ọ bụla dabere na backlinks dị mkpa nye ha na saịtị ndị dị na mpụga. Ọ bụrụ na ị nwere peeji 3 nwere ọdịnaya yiri (ma ọ bụ ụzọ atọ na otu peeji ahụ), ịnwere ike ịnwe backlinks na ibe ọ bụla karịa backlinks niile na-eduga otu n'ime ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-emebi ikike gị ịnweta otu ibe na-achịkọta backlinks niile na ogo ka mma. Inwe ogo otu peeji na nsonaazụ kachasị dị mma karịa peeji 3 na peeji nke 2!
Na ndị ọzọ… ma ọ bụrụ na m nwere 3 peeji nke na oyiri ọdịnaya na onye ọ bụla n'ime ha nwere 5 backlinks ọ bụla… ọ gaghị ọkwá nakwa otu peeji nke 15 backlinks! Ọdịnaya abụọ pụtara na ibe gị na-asọ mpi ibe ha ma nwee ike na-ewute ha niile kama ịkwalite otu peeji nke ukwuu.
Mana anyi nwere otutu oyuyo n’ime akwukwo, ugbua gini ?!
Ọ bụ ihe okike iji mepụta ọdịnaya dị na weebụsaịtị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m bụ ụlọ ọrụ B2B nwere ọrụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, enwere m ike ịnwe peeji ndị echere maka ụlọ ọrụ maka ọrụ m. Ihe ka ọtụtụ n'ime nkọwa nke ọrụ ahụ, uru, asambodo, ọnụahịa, wdg. Ha niile nwere ike ịdị otu site na ibe ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ. Nke ahụ enweghị isi!
Not na-adịghị aghọ aghụghọ na rewriting ọdịnaya iji hazie ya dị iche iche onye, ​​ọ bụ nnọọ ihe na-anabata ikpe nke ọdịnaya abụọ. Nke a bụ ndụmọdụ m:
Jiri Udiri Peeji Pụrụ Iche - Aha m na peeji nke, iji ihe atụ dị n’elu, ga-agụnye ọrụ na ụlọ ọrụ nke ibe ahụ lekwasịrị anya.
Jiri Pụrụ Iche Peeji Meta Nkọwa - My meta nkọwa ga-abụ ihe pụrụ iche na ezubere iche dị ka mma.
Tinye ọdịnaya Pụrụ Iche - Ọ bụ ezie na enwere ike ịmegharị nnukwu ihu nke ibe ahụ, m ga-etinye ụlọ ọrụ ahụ na isiokwu nta, eserese, eserese, vidiyo, nleba anya, wdg. Iji hụ na ahụmịhe ahụ pụrụ iche ma lekwasị anya maka ndị na-ege ntị.
Ọ bụrụ na ị na-enye ọrụ 8 ọrụ gị na ọrụ gị ma tinye peeji 8 ndị a na URL pụrụ iche, aha, nkọwa meta, na oke pasent (eriri afọ m na-enweghị data bụ 30%) nke ọdịnaya pụrụ iche, ị gaghị agba ọsọ ihe ize ndụ ọ bụla nke iche echiche Google na ị na-anwa iduhie onye ọ bụla. Na, ma ọ bụrụ na ọ bụ a na-ọma-e peeji nke na mkpa njikọ… ị nwere ike ọkwá ọma na ọtụtụ n'ime ha. Enwere m ike itinye akwụkwọ nne na nna na nyocha nke na-eme ka ndị ọbịa gaa peeji dị n'okpuru maka ụlọ ọrụ ọ bụla.
Gịnị Ọ bụrụ na M Naanị gbanwee Obodo Ma ọ bụ Aha Aha Maka Geographic Targeting?
Fọdụ n'ime ihe atụ kachasị njọ nke ọdịnaya abụọ m na-ahụ bụ SEO ubi na-ewe ma duputa peeji nke ọ bụla na mpaghara ọ bụla ngwaahịa na ọrụ na-arụ ọrụ. centric peeji ebe ha nanị dochie aha obodo ahụ na aha, meta nkọwa na ọdịnaya. Ọ naghị arụ ọrụ… ndị niile na peeji nke họọrọ adịghị mma.
Dika ozo, edeputara m uzo ozo nke deputara obodo ma obu obodo ndi ha jere ozi, tinye akwukwo mpaghara oru ya na map nke mpaghara ha jere ozi, megharia peeji nke obodo nile ka ha banye na oru… ma boom service oru ibe na ihu oru ibe di na elu ma ocha.
Ejila akwukwọ dị mfe ma ọ bụ ubi edochi edochi iji dochie mkpụrụokwu dịka this na-arịọ maka nsogbu ọ naghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na m bụ roofer nke na-ekpuchi obodo iri na anọ… Ọ ga-akara m mma ịnwe njikọ na ndenye aha sitere na saịtị akụkọ, saịtị mmekọ, yana saịtị saịtị ndị na-atụ aka na peeji nke otu ụlọ m. Nke ahụ ga - eme ka m bụrụ onye ọnụọgụ ma enweghị oke njedebe ole mkpụrụ okwu mkpokọta obodo m nwere ike ịhazi maka otu ibe.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO gị nwere ike ide ugbo dị ka nke a, Google nwere ike ịchọpụta ya. Ọ bụ aghụghọ ma, n'ikpeazụ, nwere ike iduga gị n'ezie ntaramahụhụ.
N'ezie, enwere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike multiple ọnọdụ peeji nke nwere pụrụ iche na mkpa ọdịnaya nile iji hazie ahụmahụ, nke ahụ abụghị aghụghọ… nke ahụ ahaziri. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ njegharị obodo… ebe ọrụ ahụ bụ otu, mana enwere ọtụtụ ọdịiche na ahụmịhe nke enwere ike ịkọwapụta na nkọwa na nkọwa.
Mana Gini banyere Ihe Odide 100% Na-emeghị Ihe Ocha?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị bipụtara nkwupụta mgbasa ozi, dịka ọmụmaatụ, nke mejupụtara ya ma bipụtara ya n'ọtụtụ saịtị, ị ka nwere ike ịchọrọ bipụta ya na saịtị gị. Anyị na-ahụ nke a mgbe mgbe. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na i dere edemede na saịtị buru ibu ma chọọ iweghachi ya maka saịtị gị. Lee ụfọdụ usoro kacha mma:
Canonical - Njikọ canonical bụ ihe metadata na ibe gị na-agwa Google na ibe ahụ bụ oyiri na ha kwesịrị ile URL dị iche maka isi iyi nke ozi ahụ. Ọ bụrụ na ị nọ na WordPress, dịka ọmụmaatụ, ma chọọ imelite ebe Canonical URL na-aga, ị nwere ike ime nke a na Rank Math SEO. Tinye URL na-esite na ya na Google ga-asọpụrụ na ibe gị abụghị oyiri yana mbido kwesịrị otuto. Ọ dị ka nke a:
Nyegharịa - Nhọrọ ọzọ bụ ịmegharị otu URL ahụ na ebe ịchọrọ ka ndị mmadụ gụọ yana igwe ọchụchọ iji depụta. E nwere oge ụfọdụ anyị na-ewepụ ọdịnaya abụọ na weebụsaịtị wee weghachite ibe niile dị ala na peeji kachasị elu.
Noindex - iriba ama na peeji noindex ma ewepu ya na engines ọchụchọ ga - eme ka injin nyocha ghara ileghara peeji a anya ma wepu ya na nchoputa njin engine. Google na-adụ ọdụ megide nke a, na-ekwupụta:
Google anaghị akwado igbochi crawler ịnweta ọdịnaya abụọ na weebụsaịtị gị, ma jiri faịlụ robots.txt ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na enwere m peeji abụọ dị oke abụọ, ọ ga-akara m mma iji akwụkwọ canonical ma ọ bụ redirect mee ka backlinks ọ bụla na ibe m gafere na peeji kachasị mma.
Gịnị Ma Ọ Bụrụ na Mmadụ Na-ezu Ohi Ma Na-ebipụta Ọdịnaya Gị?
Nke a na-eme ọ bụla ọnwa ole na ole na saịtị m. Achọpụtara m na sọftụwia m na-ege ntị ma chọpụta na saịtị ọzọ na-ebipụtaghachi ọdịnaya m dị ka nke ha. Ikwesiri ime ihe ole na ole:
Gbalịa ịkpọtụrụ saịtị ahụ site na ụdị ịkpọtụrụ ha ma ọ bụ email ma rịọ ka ewepụ ya ozugbo.
Ọ bụrụ na ha enweghị ozi kọntaktị, mee ngalaba Whois nyocha ma kpọtụrụ kọntaktị na ndekọ ndekọ ha.
Ọ bụrụ na ha nwere nzuzo na ntọala ngalaba ha, kpọtụrụ ndị na-eweta Bochum ha ma mee ka ha mara na onye ahịa ha na-emebi ikike nwebisiinka gị.
Ọ bụrụ na ha anaghị erube isi, kpọtụrụ ndị mgbasa ozi nke saịtị ha ma mee ka ha mara na ha na-ezu ohi ọdịnaya.
Nyefee arịrịọ n'okpuru Iwu Millennium Copyright Act.
SEO bụ maka ndị ọrụ, ọ bụghị algọridim
Ọ bụrụ n 'iburu n'uche na SEO bụ maka ahụmịhe onye ọrụ na ọ bụghị ụfọdụ algorithm iti aka, ihe ngwọta dị mfe. Ghọta ndị na-ege gị ntị, ịhazigharị ma ọ bụ kewaa ọdịnaya maka itinyekwu na mkpa dị ukwuu bụ omume dị ukwuu. Gbalị iduhie algọridim bụ ihe jọgburu onwe ya.
Tags: ikepeeji obodopeeji nke countyọdịnaya abụọoyiri ọdịnaya ntaramahụhụobodo seopeeji nke dabere na peeji nkeọtụtụ-ọnọdụotutu ebeakụkọ ifonoindexnyocha ọchụchọnhazi ọchụchọogorobots.txtAomume kacha mmaakụkọ ifoezuru ọdịnaya
Kedu ihe bụ njehie 404? Gịnị Mere Ha Ji Dị Oké Mkpa?
Why Your Corporate Videos Miss The Mark, Na Ihe About Ga-eme Banyere Ya